Ny herin'ny fiarahamonina dia mamirapiratra amin'ny alàlan'ny programa fianarana IMEX America
Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » Ny herin'ny fiarahamonina dia mamirapiratra amin'ny alàlan'ny programa fianarana IMEX America
Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Tourism • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Hoy ny Dalai Lama: "Raha tsy misy ny fiarahamonin'olombelona, ​​dia tsy afaka miaina ny olombelona tokana." Ny maha-zava-dehibe ny fiarahamonina dia manako mandritra ny fandaharam-pianarana ao amin'ny IMEX America, 9-11 novambra, miaraka amin'ireo fivoriana manarona ny herin'ny fitantarana, ny soatoavina ifampizarana ary ny toetran'ny olombelona.
Ny fanabeazana maimaimpoana dia manarona ny herin'ny fitantarana, ny soatoavina ifampizarana ary ny toetran'ny olombelona.
Ilay mpanao gazety Sharad Kharé dia hanolotra atrikasa momba ny fitantarana tantara sy ny fahaiza-manao lisitra tsy dia fantatra loatra.
Sharad dia hitarika ny mpandray anjara amin'ny alàlan'ny fanatanjahan-tena amin'ny resadresaka ifanakalozana hevitra izay mamporisika ny hafa handinika ny fomba ahafahan'ny tantaran'ny olona iray mamolavola ny lova navelany.
Ny fahendren'ny Dalai Lama dia fantatry ny mpanao gazety Sharad Kharé izay nampiantrano sy nandrakitra an-tsoratra azy, miaraka amin'ireo anarana malaza indrindra ao Hollywood, orinasa, ary kolontsaina, ao anatin'ny anjara toerany amin'ny maha mpiara-manorina ny Human Biography azy. Sharad dia hanolotra atrikasa momba ny fitantarana tantara sy ny fahaiza-manao lisitra tsy dia fantatra loatra. Amin'ny fotoam-pivoriana faharoa, “Inona ny lovao ?,” i Sharad dia hitarika mpandray anjara amin'ny alàlan'ny fampiharana tafatafa ifampiresahana izay mamporisika ny hafa handinika ny fomba ahafahan'ny tantaran'ny olona mamolavola ny lova navelany.
Sharad Kharé, mpiara-manorina ny tantaram-piainan'ny olombelona
Ny resaka TED-style dia naseho tamin'ny natioran'olombelona
Ny tantaram-piainan'ny olombelona dia iray amin'ireo fikambanana telo mandefa firesahana amin'ny fomba haingana TED mandritra ny seho. Ireo lahateny ireo dia mifototra amin'ny lafiny samihafa amin'ny natioran'olombelona. Dear World dia fikambanana iray mikendry ny hanampy ekipa - manomboka amin'ny kintan'ny fanatanjahantena ka hatrany amin'ireo matihanina amin'ny orinasa - mba hamorona haingana fatorana lalim-paka. Ny fomba fanaovan-tantara ataon'izy ireo dia tohanan'ny siansa ary nanazava ny ekipa fa "ny fanadihadiana dia naneho fa ny fahitana dikany tsara amin'ny zava-nitranga taloha dia misy ifandraisany amin'ny fahatsapana fa feno tena sy fahafaham-po amin'ny fiainana." Manatevin-daharana azy ireo ny TLC Lions naorin'i Gian Power izay nandao ny tontolon'ny orinasa taorian'ny lozam-pifamoivoizan'ny fianakaviana iray ary nanangana fiaraha-monina. Vokany dia vondrona manerantany misy olona tsy mampino - "liona" - izay mizara ny tantarany, ny ady ary ny fandreseny mba hanohanana sy hanentanana ny hafa. Nanazava i Gian: “Misiona ataoko mba hahatonga ny toeram-piasana hanasa ara-pihetseham-po kokoa, toerana izay itokisanao ny manodidina anao, izay ahitan'ny ekipa ho toy ny fianakaviana faharoa. Tsy ny zavatra mety ihany no atao fa tsy maintsy atao ny fandraharahana ary mifandray mivantana amin'ny famokarana olona sy orinasa. ”
Ivotoerana matanjaka izay mampivondrona ireo vondrom-piarahamonina dia soatoavina zaraina fa tsy demografika. Izany dia hoy i David Allison, mpanorina ny Valuegraphics. Manam-pahaizana amin'ny fitondran-tena amin'ny mpanjifa, David dia mpanolo-tsaina ny marika manerantany ary mpisolovava voalohany amin'ny fanilihana ireo stereotypy demografika efa lany andro. Amin'ny fotoam-pivoriana Headliner manokana ho an'ny mpanatrika IMEX America, dia hampiharihary ny valin'ny fandalinana fanadihadiana manadihady ny fahatongavan'ny hetsika sy ny fifamonoana taorian'ny valan'aretina. Manaraka izany ny andiana atrikasa mandritra ny telo andro amin'ilay fampisehoana izay ahitàna ny iray nofaritana ho “seho lalao, atrikasa ampahany” natao hampifandraisana ireo teboka eo anelanelan'ny soatoavina maha-olona sy ireo hevitra momba ny famolavolana lanja entina manentanana.
Melissa Park, mpamokatra hetsika manerantany, dia naka fomba vaovao ihany koa hamerenana amin'ny laoniny ny hetsika miovaova amin'ny toetr'andro. Ao amin'ny seminera misy azy Famerenana ny hetsika manokana hanoro hevitra ny amin'ny fomba fampifangaroana ny angovo sy fientanentanana amin'ny hetsika mivantana izy miaraka amin'ny traikefa milamina sy azo antoka, mizara lesona avy amin'ireo mpamokatra mozika.
Fanabeazana ara-potoana natao ho an'ny fomba fianarana rehetra
Carina Bauer, tale jeneralin'ny vondrona IMEX, dia nanazava ny antony maha-tonga ara-potoana ny lohahevitry ny fiarahamonina: “Misy ny fanekena ankehitriny ny maha-zava-dehibe ny fananganana vondrom-piarahamonina. Ho an'ny maro ao amin'ny indostria, ny seho dia maneho fotoana tokana hihaonana amin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-miasa izay tsy hitany tao anatin'ny 2 taona. Tianay ny manome fotoana ny mpanatrika anay hifandray sy hanatsara ny fahaizan'izy ireo, miaraka amin'ny fitaovana hamoronana ny vondrom-piarahamonin'izy ireo manokana amin'ny fivoriana sy hetsika ataon'izy ireo manokana. Noho izany, namolavola ny fandaharam-pampianarantsika izahay amin'ny fizahana ireo singa samihafa momba ny dikan'ny hoe manangana ary tafiditra ao anatin'ny vondrom-piarahamonina iray - ary ny fotoam-pianarantsika dia notarihin'olon-kafa manentana fanahy manana tantara mahatalanjona holazaina. ”
Ny programa fianarana maimaimpoana ao amin'ny IMEX America dia manomboka miaraka amin'ny Alatsinainy Smart, ampandehanin'ny MPI, amin'ny 8 Novambra ary manohy atrikasa maromaro, latabatra lohahevitra mafana ary seminera mandritra ny telo andro amin'ilay fampisehoana - natao hamahana ireo fomba fianarana samy hafa.
Ny IMEX America dia atao ny 9-11 Novambra amin'ny toerana vaovao - Mandalay Bay, Las Vegas - miaraka amin'ny Alatsinainy Smart, ampandehanin'ny MPI, amin'ny 8 Novambra. Eto.
Raha mila tsipiriany misimisy momba ny safidin'ny trano hipetrahana sy ny tsindrio boky Eto.
Expo 2020: Emirates Airlines mankany Seychelles
Aha: zotram-piaramanidina Nevada vaovao miorina ao Reno – Tahoe
Ny fivoriamben'ny UNWTO any Madrid dia mihetsiketsika tanteraka
Rheumatoid Arthritis Fitsapana klinika vaovao
2022 Tanàna malala-tanana indrindra any Etazonia
Airbus: Fikarohana vaovao momba ny famoahana solika 100% maharitra...
Fivarotana trano fandraisam-bahiny noely sy taom-baovao
Ny minisitry ny fizahantany any Costa Rica dia dingana lehibe ho an'ny…
Ny renivohitry ny Nosy Solomon dia eo ambanin'ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina taorian'ny herisetra...
Fiaraha-miasa matanjaka i Shina sy Afrika miady amin'ny COVID-19
Indonezia Vaovao Tsara: Miasa mafy, marani-tsaina & tso-po
Ahoana no hamonjena vohitra miaraka amin'ny fizahan-tany dite